Cabdi Maxamed Cumar Oo Laga Diiday Damaanad Uu Maxkamadda Ka Dalbaday – somalilandtoday.com
Cabdi Maxamed Cumar Oo Laga Diiday Damaanad Uu Maxkamadda Ka Dalbaday
(SLT-Addis Ababa)-Madaxweynihii hore ee dawlad degaanka Soomaalida Itoobiya, Cabdi Maxamed Cumar, iyo saddex qof oo kale oo ka mid ahaa maamulkiisii ayaa shalay ka soo hor muuqday maxkamad ku taalla magaalada Addis-ababa, siday baahisay wakaallada wararka Itoobiya ee ENA.
Saddexda xubnood ee maxkamadda lala soo taagay Cabdi Maxamed Cumar, waxa ka mid ahaa madaxii hoggaanka Haweenka iyo Carruurta ee dawladii hore ee degaanka Soomaalida Itoobiya, Raxma Maxamed Haybe,hoggaankii hore ee xafiiska biyaha iyo waraabka Suldaan Maxamed iyo Madaxii hore ee xafiiska qurbajoogga ee deegaanka Soomaalida Itoobiya Abdurazak Saani.
Wakaallada wararka Itoobiya waxay sheegtay inay afartaas masuul ay ku eedaysan yihiin dilal iyo barokicinta dad badan isla markaana ay burburiyeen qalabkii dhex yaallay xarumo diimeed. Waxa kaloo eedaymaha loo haysto madaxweynihii hore ee Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar iyo saddexdaas xubnood ee kale ka mid ah in ay dhiirigeliyeen inay dhallinyarada degaankaasi ku kacaan rabshado qowmiyado ku salaysan.
Warku wuxuu intaas ku daray in eedaysaneyaashaasi ay maxkamadda ka dalbadeen in ay damaanad lagu sii daayo oo kiiskooda iyagoo dibada jooga ay dhammeysataan hase yeeshee maxkamadda ayaa taasi diiday, bal se maxkamaddu waxay damaanad qaaday caafimaadkooda maadaama oo ay xanuunsanayaan qaarkood, waxaanay maxkamaddu Booliska Itoobiya siisay 14 maalmood oo dheeraad ah oo ay ku baadhayaan dacwadahooda.
Madaxweynihii hore ee degaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar ayaa xabsiga la dhigay Isniintii toddobaadkan, iyadoo laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaalla Addis-ababa oo laga helay hub.